डा. केसीको समर्थनमा कञ्चनपुर प्रशासनमा धर्ना
माेहन विष्ट कञ्चनपुर
२०७७ असोज २० मंगलबार १४:२२:००
माेहन विष्ट, कञ्चनपुर
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग राख्दै कञ्चनपुरका महिला अधिकारकर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि एक घन्टासम्म नागरिक संघर्ष समितिमा आबद्ध महिला अधिकारकर्मीले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग राखेर प्रशासनको मूल गेटमा धर्ना दिएका हुन् ।
नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले डा. केसीको सत्याग्रह नागरिकको हितमा भएकाले सरकारले माग पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ ।
नागरिक संघर्ष समिति कञ्चनपुरकी सदस्य एवं अधिकारकर्मी शारदा चन्दले सरकारले डा. केसीका सबै माग सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । ‘डा केसीले उठान गरेका माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘जनताको पक्षमा भएका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ किन ?’
वार्ता असफल भएपछि डा. केसीका समर्थक सडकमा [फोटोफिचर]
केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य भन्छन्- प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा वार्ता भाँडियो
अनशनको २७औँ दिन : सहमतिनजिक पुगेको वार्ता भाँडियो
डा‍. केसीको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि ल्याएकाे छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
अनशनको २४औँ दिनमा सरकारले बनायो वार्ता टोली, डा. केसीको तर्फबाट पनि वार्ता समूह
सरकारले डा. केसीलाई मार्नै खोजेको हो ?
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको दाबी– देशको भाग्य र भविष्य नेकपासँग जोडिएको छ, ५० वर्ष सरकार चलाउँछौँ
त्रिविमा साढे आठ महिनापछि प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय